Waa Kuma Maskaxda? | RayHaber | raillynews
HomeGUUDWaa Kuma Maskaxda?
oo leh maskax qoto dheer
Zihni Derin (wuxuu dhashay 1880, Muğla - taariikhda geerida 25kii Agoosto 1965, Ankara), aqoonyahanka cilmiga u qaabilsan Turkiga, aqoonyahan. Wax soo saarka shaaha ee Turkiga ayaa horseeday bilowga iyo fidinta; Waxaa loo yaqaanaa “aabaha shaaha”.
Wuxuu ku dhashay Mugla sanadkii 1880. Aabaheed waa Mehmet Ali Bey, wuxuu xubin ka yahay qoyska Kuloğulları ee Muğla. Dugsiga Sare ee Muğla sanadkii 1897, Iskuulka Beeraha ee Tesaloniika sanadkii 1900, 1904 Halkalı Wuxuu ka qalin jabiyay Iskuulka Beeraha. Sanadkii 1905-kii, wuxuu bilaabay inuu u shaqeeyo sidii shaqaale dowladeed iyadoo uu saaran yahay waajibaadka Kormeerka Kormeerka Macdanta Gobolka Aydın.
Wuxuu noqday Kormeeraha kaynta sanadkii 1907 ka dib markii uu u shaqeeyay Kormeeraha Duur ee Rhodes (oo loogu yaqiinay degmooyinka Algeria-i Bahr-i Sefid) Kormeeraha kaynta, Gediz iyo Simav.
Wuxuu ka shaqeeyay cilmiga kimistariga, cilmiga farshaxanka iyo cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga dhulka oo uu ka ahaa iskuulka Beeraha ee Tesaloniika laga soo bilaabo sanadkii 1909 ilaa 1912. Wuxuu guursaday Maide Hanim magaalada Tesaloniika sanadkii 1911; wuxuu guursaday seddex caruur ah.
Wuxuu macallin ka soo shaqeeyey Bursa intii u dhaxeysay 1914-1920 wuxuuna ahaa ku-xigeenka agaasimaha waxbarashada Qaranka ee Bursa.
Ka Qaybqaadashada Halganka Qaranka
Wuxuu ka tagay Bursa wax yar ka hor duulaankii Giriigga ee 1920 wuxuuna u guuray Ankara; Wuxuu noqday Agaasimihii Guud ee Guud ee Beeraha ee Wasaaradda Dhaqaalaha, oo ay dhistay Dowladdii Halgankii Qaranka; Wuxuu jagadan sii waday ilaa 1924.
Waxqabadka ugu horeeya ee shaaha
Ankara bishii Abriil 1921, wuxuu ka qayb qaatay wakiil ka socda Wasaaradda Dhaqaalaha guddi ay ka soo qayb galeen wakiillo ka socda wasaaradda si ay ugala hadlaan dhibaatooyinka dhaqaale iyo bulsho ee dalka. Kacaankii Ruushka kadib, xiritaanka xuduuda Batumi, waxaa loo xilsaaray inuu baaro si uu shaqooyin cusub uga abuuro Bariga Madow, halkaasoo shaqo la’aanta iyo dhibaatooyinka amniga ay kordheen. Halkalı Wuxuu akhriyay warbixintii uu qoray Cali Rzaza Bey, oo ka mid ah macallimiinta Dugsiga Sare ee Beeraha, natiijada baaritaanka uu ka sameeyay Batumi sanadkii 1917. Warbixinta, waxaa lagu sheegay sababaha ay suurtogal ugu tahay in shaaha lagu beero agagaarka Rize. Zihni Derin ayaa ka aqriyay warbixinta maskaxda ee Ali Rzaza wakaaladda Rize, waxaa la go’aamiyay in la aasaaso xarun lagu xanaaneeyo si loo bilaabo arjiga.
Zihni Bey, oo loo diray Rize sanadkii 1923 si uu u dhiso shaah iyo xanaano carruureed, wuxuu bilaabay inuu ka shaqeeyo dhul 15-qadiim ah oo kuyaala buurta Garal, taasoo ah qasnadda. Wuxuu arkay in geedo shaaha oo ay qaar ka mid ah dhiirrigeliyayaashu ka keeneen Batumi isla markaana ku beero sidii dhir udgoon oo gobolka ah oo si wanaagsan u horumarey; Sanadkii 1924, wuxuu booqday Batumi wuxuuna baaray jardiinooyinka shaaha, warshad shaaha iyo Saldhigga Cilmi baarista Dhirta ee Astropical Plants oo ay dhiseen Ruushka. Abuurka shaaha iyo dheecaanka uu keenay, citrus iyo noocyo miro ah, rhizomes bamboo ah ayaa lagu dhex beeray xannaanada. Wuxuu soo gabagabeeyey in cimilada iyo qaab dhismeedka gobolka ay ku habboon yihiin soosaarka shaaha. Wuxuu isku dayay inuu kayd ka keeno Batumi oo uu u qaybiyo dadweynaha, laakiin isku daygan ugu horreeyay, oo aan helin feejignaan ku filan, wuu ku guuldareystay.
Zihni Derin, oo ku soo noqday booskiisa Ankara, wuxuu diyaariyey hindise sharciyeed oo ku saabsan mowduucan oo sharciga waxaa lagu meel mariyey iyadoo la kaashanayo wakiillada Rize ee muddadaas ah Febraayo 6, 1924 oo la tiriyay 407. Sharciga, Gobolka Rize iyo Borcka Crash; Hazelnut, Orange, Lemon, Tangerine, Shaaha Shaaha wuxuu dhaqan galay isagoo ku hoos jira magaca Beeraha.
Ku noqo barida
Sababta oo ah ku-dhaqan darrida sharciga la dhaqan galay iyo aqoon la’aanta dadka gobolka ee la xiriirta beeritaanka shaaha, Zihni Bey wuxuu ku noqday xirfada waxbarista markii howlihii beeraha ee shaaha ay daaheen. Wuxuu wax ku baray iskuulo kala duwan oo kuyaala magaalada Istanbul. Wuxuu ku sii watay Ankara ilaa 1930.
Kadib markii uu shaaha beeraha yimid ajandaha mar labaad dalka, waxaa loo magacaabay inuu noqdo La-Taliyaha Guud ee Kormeerka Guud ee Beeraha ee Thrace 1936 iyo Madaxa La-Taliyaha ee Wasaaradda Beeraha 1937.
Ururka Beeraha, oo laga dhisi doono Rize iyo nawaaxigeeda 1938, cinwaanka qabanqaabiyaha shaaha wuxuu si balaaran uga shaqeeyey faafinta soosaarka shaaha. Ka dib markii uu shaqada ka fariistay da’da loo yaqaan da'da 1945, wuxuu sii waday inuu ka shaqeeyo qaban-qaabiyaha Wasaaradda Beeraha.
Wuxuu noqday ku-xigeen madax-bannaan oo Rize ah doorashadii 1950; laakiin ma uusan geli karin baarlamaanka.
Zihni Derin, oo loogu yeeray marti sharaf sharafta loogu lahaa "27 guuradii Sanad-guuradii Shaa" ee lagu qabtay Rize 1960 ka dib afgembigii May 1964, 40, wuxuu ku dhintay Ankara.
Shaqadiisa waxaa loo arkay inuu mudan yahay abaalmarinta Adeegga TÜBİTAK 1969.
Tareenka Eurasia wuxuu gaari doonaa halka ugu hooseysa
Tareenka Metro ee Narlıdere wuxuu noqon doonaa tunnel depth
Duqa magaalada Zihni Sahin wuxuu siiyay 'Mucjiso' ah dadka basaska dadweynaha ee gaarka loo leeyahay